Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny COVID-19 dia niteraka fianjerana 77% tamin'ny fiaramanidina manerantany
The Covid-19 nandohalika ny indostrian'ny fiaramanidina. Tamin'ity herinandro ity (30 martsa - 5 aprily), ny fahaizan'ny zotram-piaramanidina iraisam-pirenena dia nidina tamin'ny 23% fotsiny tamin'ny tamin'ny herinandro voalohany tamin'ny volana aprily lasa teo. Seza 10 tapitrisa fotsiny no mbola niasa, hanamorana ny dia ilaina, raha ampitahaina amin'ny 44.2 tapitrisa tamin'ny taona lasa.
Raha jerena ny telovolana voalohany amin'ny taona, ny fahaizan'ny seza fiaramanidina dia 9.4% raha oharina amin'ny Q1 2019. (seza 482 tapitrisa no miasa tamin'ny Q1 2020, raha oharina amin'ny 532 tapitrisa tamin'ny Q1 2019.) Tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary, ny fahaiza-manao dia somary niakatra tamin'ny taon-dasa. Saingy, nanomboka nianjera izy io tamin'ny herinandro lasa tamin'ny volana Janoary, raha nanambara ny governemanta Shinoa fa voafetra ny dia lavitra. Nanomboka teo ka hatramin'ny tapaky ny volana martsa dia nianjera be ny fahaizan'ny rivotra; tamin'izay fotoana izay dia nianjera tampoka tamin'ny faran'ny volana izy.
Ny kaompaniam-pitaterana folo voalohany izay miasa amin'ny herinandro voalohan'ny volana aprily (30 martsa - 5 aprily) dia: KLM, misy seza 800,000 mbola miasa, Qatar Airways, miaraka amin'ny seza efa ho 500,000 no miasa ary Ryanair misy 400,000. Izy ireo dia arahin'ny Delta, Air France, American, BA, Wizz Air, Cathay Pacific ary Jeju. Saingy, hiova tsy ho ela ity sary ity, satria vao tsy ela akory izay i Ryanair dia nanambara fa saika ny fiaramanidina manontolo dia hiorenan'ny valan'ny COVID-19.
Nakaton'ny governemanta ny firenena iray manontolo; ary ho setrin'izany, ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia nanapaka ny serivisy ho an'ny taolana. Azo inoana fa rehefa tonga any amin'ny sisin'ny areti-mandringana isika, dia tsy hiverina amin'ny toe-javatra tsena mavesatra nananantsika tamin'ny fiandohan'ny taona, na aiza na aiza akaikin'ny mora an-tsaina ny olona sasany. Amin'izay fotoana izay dia azo inoana fa maro ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ho lasa marobe; Tsy hanana fahatokisan-tena intsony ny mpanjifa amin'ny sidina manidina ary tsy maintsy ilaina ny fihenam-bidy tsy ara-toekarena mba hisarihana ny fitakiana hiverina.